Régis Gizavo : ho tonga ny 26 jolay ny razana | NewsMada
Régis Gizavo : ho tonga ny 26 jolay ny razana
“Mitomany ny angorodao”, hoy ny rehetra. Ao anatin’ny fotoana fanomezam-boninahitra sy fanaovam-beloma farany an’i Régis Gizavo ny fianakaviamben’ny kanto.
Nanakoako naneran-tany ny vaovao ratsy… Niraradraraka nanaraka izany ny fanehoana alahelo sy fanomezam-boninahitra isan-tsokajiny, ho an’i Régis Gizavo. Nisy, ohatra, ny fivoriana nanehoana fiaraha-miory nataon’ireo namana sy mpifanerasera, na ao anatin’ny mozika na tsia, ny talata hariva teo tao amin’ny Place Saint Michel any Paris.
Araka ny vaovao azo avy any an-toerana, naneho ny firaisankina izy ireo, ka niandraikitra ny fikarakarana ny razana sy ny fampodiana azy aty an-tanindrazana. Raha ny vinavina, ho tonga ny alarobia 26 jolay izao amin’ny 4 ora maraina ny vatana mangatsiakan’i Régis Gizavo.
“Efa nisy ny fifampiresahana tamin’ny fianakaviana, ka manam-pikasana ny hanome mari-boninahitra ho azy ny minisitera. Miandry izay fanapahan-kevitra farany, satria tsy mbola eto an-toerana koa ny minisitra fa manatrika ny lalaon’ny Frankôfônia”, hoy ny nambaran’ny mpampita vaovao ao amin’ny minisiteran’ny Kolontsaina.
Raha ny fantatra kosa, hatreto, vantany vao higadona an-tanindrazana dia hentina any Toliara, tany niaviany.